Shiinaha Universal Set-top Box shelf shelf iyo soo saarayaasha | Zeno
Qaab No.: Q08
Q08, Feejignaanta Darbiga Fidinta ee Nidaamyada madadaalada guriga waxay ka dhigayaan aaladahaaga iyo qalabkaaga inay dhulka ka saaraan. Dhiigga dhalada ah ee 5mm Muraayadda leh wuxuu taageeraa ilaa 22 lbs, oo ku habboon qabashada ciyaartoyga DVD-ga, aaladaha qulqulka, qalabka ciyaarta yar yar, qalabka maqalka.
Profile khafiif ahi wuxuu keydiyaa meel wuxuuna sifiican ugu shaqeeyaa shaashadda fidsan ee khafiifka ah
Rakibaadda Fudud iyo Isku-xidhka tilmaamaha oo ay ku jiraan qalabka si aad shelf-kaaga u rakibto (Kuma haboona kor u qaadista si aad keligaa u-qalajiso!)
Ku kobci muuqaalkaaga muuqaal leh shelf, darbi jiif hoose oo muuqaalkiisu hooseeyo oo ku habboon dejinta madadaalada guriga. Shelf 14 "x 10" wuxuu ka samaysan yahay muraayad adag oo culeyskeedu dhan yahay 22 rodol. Sida caadiga ah lagu rakibay TV-yada hoostiisa, shelf-kan sabbaynaya waxaa loogu talagalay inuu qabto DVD-yada, aaladaha qulqulka, qalabka ciyaaraha, qalabka maqalka, iyo inbadan. Muuqaalka dhuuban wuxuu si aad ah ula shaqeeyaa shaashadda fidsan ee aadka u khafiifka ah TV-yada.
Sii xaruntaada madadaalada muuqaal nadiif ah oo casri ah oo leh darbi dul sabayn ah. Loogu talagalay in muuqaal ahaan raalli laga yahay oo adag, sheygan ayaa qalabkaaga ku ilaalin doona meel aamin ah oo habboon.
Muraayadaha la badbadiyay
Dusha sare ee muraayadda jilicsan ayaa bixisa muuqaal qurux badan oo si fiican isugu dhafan leh xarumo madadaalo kala duwan iyo qaababka qurxinta.
Ku raaxayso isku-darka fudud iyo rakibidda dhammaan qalabka lagama maarmaanka u ah iyo tilmaamaha tallaabo-tallaabo ah si aad uhesho qaybtaada shelf ee sabaynaysa waqti aan badnayn!
1. Waxay taageertaa ugu badnaan 8KG shelf kasta
2. Mid ka mid ah shelfiyadaha muraayadaha kulul ee la xoojiyay (380 x 280mm x 5mm shelf kasta)
3. Loogu talagalay Ciyaartoyda DVD / Blu-Ray, Sanduuqyada Satelite / Cable, Consoles Games, Hi-Fi iyo Hareeraha Hadalka
4. Nidaamka Maareynta Cable si aad u qariso dhammaan fiilooyinkaaga qasan
5. Way fududahay in la isticmaalo buug-tilmaameedka si dhakhso leh oo sahlan loo rakibo iyadoo la rakibayo
Faahfaahinta faahfaahsan ee S08:
Cabirka Muraayadda 345x245mm
Ku habboon: Ciyaartoyda DVD-ga Universal
Awood xamuul: 10kg
Gudaha Sanduuqa: 36.5 * 25.8 * 5cm
Sanduuqa Dibedda: 50 * 38 * 27.8cm
Hore: Miiska kormeerku wuxuu ku dhejiyaa DS90
Xiga: Projector Fuula T218 / W